AFRAY vita amin'ny fanadihadiana, Tetikasa Tender - RayHaber
HomeTORKIACentral Anatolia03 AfyonkarahisarAFRAY vita amin'ny fanadihadiana, Tetikasa Tender
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 03 Afyonkarahisar, Central Anatolia, Commuter Trains, Railway, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, TORKIA 0
afrayda etut momba ny tetik'asa
Ny ben'ny tanàna Mehmet Zeybek'in AFRAY, izay iray amin'ireo fampanantenan'ny hetsika sy fandalinana tamin'ny fifidianana dia nahazo valiny tsara. Ny ben'ny tanàna Zeybek dia nilaza tamin'ny ODAK, raha ny tetik'asa AFRAY dia hotanterahina amin'ny Oktobra. Faly aho mizara ity vaovao ity amin'ny oloko. ”
Iray amin'ireo olana lehibe indrindra afovoan-tanànan'i Afyonkarahisar ny fisorohana ny fitateram-bahoaka sy ny lozam-pifamoivoizana.
180 HODINANDRO IZANY
Tetikasa AFRAY, izay hokarakaraina miaraka amin'ny TCDD, nokarakarain'ny Tale Jeneralin'ny Afyonkarahisar 7. 680 arivo TL dia nalefa tany amin'ny Direktoran'ny faritra ho an'ny tetik'asa fandalinana. Fantatra fa vita tamin'io vola io ny fandinihana ny tetik'asa AFRAY. Ny ben'ny tanàna Mehmet Zeybek, izay nampahafantatra ny AFRAY fa ny volavolan-dalàna ho an'ny tetikasa dia hotanterahina ao amin'ny 22 Oktobra: hoy ny AF AFRAY, izay fampanantenako fifidianana, dia nahatratra ny dingana faharoa amin'ny asa. Ny orinasa 22 Drilling dia handresy ny volavolan-tànana ho an'ny tetikasa hotarihan'ny TCDD7 Regional Directorate amin'ny Oktobra. no hamaritra ny alalana fananganana AFRAY ao 180 miaraka amin'ny vidin'ny lalana, indrindra ny fanadihadiana ny tany. AFRAY malemy TCDD 2020 ao 7. Ho tanterahan'ny Diriteran'ny faritra misy antsika izany. " (ifantohana/ Ahmet Sarlık)
TCDD Nurdağ - Başpınar Stations Ny tanjon'ny tetikasa New Railway Fandinihana, tetik'asa, Injeniera ary ny sampandraharaham-pampahalalam-baovao dia nirakitra fanavaozana vaovao vaovao 18 / 04 / 2012 Ny fampivoarana vaovao momba ny fampisehoana ny Fanadihadian'ny New Railway Demiryolu, ny tetikasa, ny teknikam-panofanana momba ny serivisy sy ny sampana eo anelanelan'i Nurdağ sy Başpınar ecek izay ho tontosain'ny Direction de la Direction du Travail de la Région de la Région de la République de Turquie. Azafady tsindrio raha mila vaovao bebe kokoa. I www.yatirimlar.co
AFRA's 1. Fivoriam-be nomena 22 / 07 / 2019 Afyon Gar sy University Kocatepe AFRAY 1. Stage 2. Ny famatsiam-bola dia nomena ny fananganana ny tsipika mahazatra, ny fanadihadiana, ny tetikasa, ny engineering sy ny serivisy. Ben'ny tanàna Mehmet Zeybek, TCDD 7. Ny talen'ny faritra Adem Sivri dia nandoa fiverenana mitsidika. TCDD 7, izay nampahafantatra ny ben'ny tanàna Zeybek momba ny toeran'ny tetikasa AFRAY, izay anisan'ireo fampanantenana nataon'ny Ben'ny tanàna Mehmet Zeybek. Talen'ny faritra Adem Sivri, Direction de la Direction du Directeur du Directeur de la Direction du Directeur et de la Direction de la Transparency des Études de la Transition entre la Afyon Gar et Université de Kocatepe 1. Stage 2. Mahazatra ...
Toker - Apron Project joint venture dia nahazo ny fanadihadiana sy ny tolotra tetikasa ho an'ny lalana Separation Çubuk-Şabanözü 19 / 03 / 2014 Cankiri - Ankara Junction - Rod -Şabanöz Separation lalana fampianarana sy ny tetikasa tamim-pitiavana Toker - Apron General Tale Tetikasa mpiara barotra nahazo lalana (KGM) izay ho tanterahana amin'ny alalan'ny "(Cankiri - Ankara) Junction - (Hazokely-Şabanözü) Junction Highway Survey and Design Consulting Ny fanombanana ny fikarakarana ny alim-bolana dia vita ". Araka ny vaovao voaray avy amin'ny Investments Magazine; Toker - Apron Project joint venture dia nahazo ny tender tamin'ny tolotra 1.851.782,02 lira. Aorian'ny famaranana ny dingana ara-pitsarana, ny mpandresy dia tokony asaina hanao fifanekena. Araka ny fantatra, ireo orinasa hafa nandray anjara tamin'ilay fifanarahana dia voafaritra toy izao manaraka izao: 755.559.
TCDD Nurdağ - Başpınar Stations New Railway Tetikasa iray dia nanao sonia niaraka tamin'i Yüksel Proje izay nahazo ny fifanarahana ho an'ny fanadihadiana, ny tetikasam-panofanana, ny teknika sy ny serivisy. 20 / 04 / 2012 Ny fampivoarana vaovao momba ny fampisehoana ny Fanadihadian'ny New Railway Demiryolu, ny tetikasa, ny teknikam-panofanana momba ny serivisy sy ny sampana eo anelanelan'i Nurdağ sy Başpınar ecek izay ho tontosain'ny Direction de la Direction du Travail de la Région de la Région de la République de Turquie. Araka ny vaovao voaray avy amin'ny Investments Magazine; Nofehezin'ny Yüksel Proje ilay fifanekena izay nahazo ny fifanarahana tamin'ny lisitry 2.956.348. Araka ny fantatra, ireo orinasa hafa nandray anjara tamin'ilay fifanarahana dia voafaritra toy izao: Emay Engineering Ref.: Investments Magazine 1070 / 05 Martsa 2012 (ÖA) UBM - Aksa Proje
Eti Maden Kırka - Tetikasa Railway Line Değirmenözü Nisy fifanarahana natao tamin'ny KMG Proje izay nahazo ny fifanarahana momba ny fanaraha-maso sy ny sampan-draharaha momba ny fifaninana 24 / 10 / 2012 Ny fampivoarana vaovao momba ny fampisehoana ny Kırka - Değirmenözü Fanadihadiana ny làlan-dalamby, ny tetikasa ary ny serivisy momba ny seraseram-biraon'ny sampan-draharahan'ny Mpiasa Eti Mine dia nosoratana. Araka ny vaovao voaray avy amin'ny Investments Magazine; Ny fifanekena dia nanao sonia niaraka tamin'ny KMG Proje izay nahazo ny lahateny tamin'ny 11 Oktobra 2012 lira. Azafady tsindrio raha mila vaovao bebe kokoa: Source: Investments
Ny drafi-pitaterana vaovao momba ny fitaterana vaovao dia miasa handrakotra ny distrika 19 nanomboka tany Antalya
Tao Eskişehir, namaky boky teo amin'ilay kamiao ny mpianatra ary nanome fanomezana ho an'ny olom-pirenena
TCDD Nurdağ - Başpınar Stations Ny tanjon'ny tetikasa New Railway Fandinihana, tetik'asa, Injeniera ary ny sampandraharaham-pampahalalam-baovao dia nirakitra fanavaozana vaovao vaovao
AFRA's 1. Fivoriam-be nomena
Toker - Apron Project joint venture dia nahazo ny fanadihadiana sy ny tolotra tetikasa ho an'ny lalana Separation Çubuk-Şabanözü
TCDD Nurdağ - Başpınar Stations New Railway Tetikasa iray dia nanao sonia niaraka tamin'i Yüksel Proje izay nahazo ny fifanarahana ho an'ny fanadihadiana, ny tetikasam-panofanana, ny teknika sy ny serivisy.
Eti Maden Kırka - Tetikasa Railway Line Değirmenözü Nisy fifanarahana natao tamin'ny KMG Proje izay nahazo ny fifanarahana momba ny fanaraha-maso sy ny sampan-draharaha momba ny fifaninana
TCK İzmir Bay Crossing and Connections Project Nisy fifanekena natao tamin'ny Yüksel Proje izay nahazo ny lahateny ho an'ny fandaharam-pampianarana sy ny tetikasa momba ny serivisy, anisan'izany ny làlambe sy lalamby.
TCDD Istanbul - Ankara Fanofanana ho an'ny fiarandalamby ho an'ny fiarandalamby ho an'ny seranan-tsambo iraisam-pirenena
Narlı - Akçagöze Tanjon'ny tetikasa Yüksel Proje dia nahazo ny tolotra ho an'ny fanadihadiana lalamby, tetikasa, engineering sy consultation